३ करोड नेपालीलाई रुʼवाउने जवाफ, गरिब दुखीको हिरो शिशिर भण्डारीलाई “समाजसेवाबाट कति लुʼटिस” भनेर प्रश्न गरेपछि - Nepal Insider
३ करोड नेपालीलाई रुʼवाउने जवाफ, गरिब दुखीको हिरो शिशिर भण्डारीलाई “समाजसेवाबाट कति लुʼटिस” भनेर प्रश्न गरेपछि
January 12, 2020 250
काठमाडौं- काठमाडौं नजिककै जिल्ला धादिङ, बैरेनीका हुन्, कलाकार तथा भिजे शिशिर भण्डारी । बिज्ञान बिषय पढ्न २०६३ सालमा काठमाडौं आएका शिशिर अमृत साईन्स क्याम्पसमा पढ्दै एफ.एम सुन्नमा रुचि राख्न थाले । एफ.एमका बिभिन्न कार्यक्रम सुन्ने क्रममा २०६४ सालमा उनले हास्य रेडियो रेडियो अडियोमा जागिर खाए ।
जागिर खानुपुर्व काठमाडौंमा कति रात आफु भोकै सुतेको शिशिरले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । हुन त, शिशिरको परिवार गरिवीमा थिएन तर किन भोकै सुते त शिशिर ? उनको उत्तर थियो, म संग पैसा थिएन र मैले बांच्नका लागि आमा बुवासंग पैसा माग्नु पर्दथ्यो । म संघर्ष बुझ्न चाहन्थें । आफै आफैलाई बचाउन चाहन्थें ।
उनको उक्त कार्यक्रम निकै चर्चित कार्यक्रम हो । उनले हिन्दी गीतमा नेपाली हिरो र नेपाली गीतमा बलिउडका कलाकारलाई नचाउने उक्त कार्यक्रम अझै पनि धेरैले सम्झन्छन् । शिशिर भण्डारीलाई समाजसेवाबाट कति लुटिस भनेर प्रश्न गरेपछि !
Prevविवाह गर्दै रवि ओड
Nextआमाको ‘बाटो’मा छोरी- ‘फ्यान’को प्रतिक्रियाले मख्ख सुहाना !
नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको किनारमा सालि भेनाले के गरे यस्तो ? जुन देखेर सबै चकित (भिडियो)
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (36909)